Kedu uru anụ ahụ nke ịgba ịnyịnya ígwè?
Bicyclemụaka igwe kwụ otu ebe
Ugbo ala agba agba
Uringga njem igwe
Oge Igo Ego
Etu esi edozi igwe
Oge ụlọ akwụkwọ, were gị họrọ igwe kwụ otu ebe
Ndụ bụ mmega ahụ, maka ọdịmma ahụike, a ga-enwerịrị mmega ahụ, ịgba ọgba tum tum bụ egwuregwu na-amasịkarị ndị mmadụ, n'ihi na enwere ọtụtụ uru ịnya igwe, ịgba taa ka anyị lelee uru dị n'ịgba ọsọ igwe kwụ otu ebe.
Uru nke ịnya igwe
1. Nzụlite ụbụrụ
Carrynyịnya ibu abụghị naanị imegharị anụ ahụ, ọ bụkwa ọrụ uche n'otu oge ahụ, n'ihi na ngagharị sọlfọ dị n'akụkụ dị iche iche na-emegharị ahụ, nwere ike iwelite ike nke ụjọ usoro, ụkwụ abụọ na-agafe n'ụzọ ọzọ nwere ike ime ka ekpe, Ọrụ ụbụrụ dị mma nwere ike ịmalite n'otu oge ahụ, nwere ike igbochi nká ụbụrụ ụbụrụ na ịla n'iyi na-eme nke ọma karịa.
2. Iji mee ka ahụ dị mma
N'ihi na mmega ahụ ịgba bọọlụ nwere ike ịme mmega ahụ nke ukwu na aka, ma mee ka ahụ nwee ume, na mgbe ọmụmụ ihe na - eme ka ọmụmụ na - arụ ọrụ, na igwu mmiri ma na - agba ọsọ bụ otu ihe, n'ihi na egwuregwu ahụ nwere ike ọ bụghị naanị ịme mmega ahụ nke ọma. hip, ikpere na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ na 26 maka akwara, mana ọ nwekwara ike ịnyefe olu, azụ, ogwe aka, afọ, ukwu, ebe dị ka akwara hip, nkwonkwo ụkwụ, akwara na ịgba ígwè, idozi ogologo oge. nwere ike dozie arụmọrụ nwoke.
3. Mbelata ibu iji belata ibu
Cygba ígwè bụ ihe mmebi nke ikuku, nwere ike ịhazigharị anụ ahụ, dị irè iji nweta oke okpomọkụ, n'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ imezu ebumnuche nke ịdị arọ iji nwee ntachi obi zuru oke, mmega ahụ na-agbanwe agbanwe ga-enyere gị aka inweta nsonaazụ kacha mma ngwa ngwa.
4. Belata nrụgide
Na mgbakwunye, mmega ahụ mgbatị oge niile nwekwara ike ime ka obi dị jụụ, nke dabara adaba maka ndị ọrụ ọfịkasị ahụ ga-ewepụ ngwa ngwa site na nrụgide, wepụ iwe na inwe ọmụmụ ihe na ịrụ ọrụ n'ọnọdụ dị mma.
5. Ogologo ndu
Otu oge, enwere ike ịhụ uru ole na ole anyịnya dị na ngwụcha ngwụcha ngwụcha bụ ihe arụmọrụ arụ yana ịmega ahụ ọfụma, yabụ ịgbakwunye afọ ruo n’ókè ụfọdụ, ndụ ọ bụghị ihe ijuanya, ebe ndụ dị, bụ mmegharị ahụ, ezigbo ahụ mmadụ dị mma na enweghị mmega ahụ kwesịrị ekwesị na mmega ahụ, a na - enwe olile anya ndị enyi nwere ike iji oge ezumike gị mee ihe nke ọma, jiri ịgba ígwè mee ihe nke ọma na ahụike na uche, iji nweta ebumnuche nke ahụ ike na nke uche.
Ugbu a ịmara na ịgba ígwè dị mma maka gị, lee ebiela ụzọ isii maka ịgba ọkpụrụkpụ ịgba.
1. Ihe kacha mkpa banyere ịgba ịnyịnya bụ yikwasị okpu agha
Ọ bụ ezie na ịnya igwe kwụ otu ebe adịghị emerụ ahụ dịka ịnya ụgbọ ala, emetụtakwara ya na nchekwa ndụ ndụ nke ndị na agba.
2. cgba ígwè ga-enwerịrị atụmatụ
Dabere na ọnọdụ onye ọ bụla ga-eme iji mepụta ụzọ na usoro njem ya, agaghị edobe ụzọ maka enweghị isi, yabụ na ike gwụrụ onye ọ bụla, ma tufuo ihe ọchị nke igwe, ọ bụghị naanị ngwaọrụ nrụzi taya, kamakwa ihe enyemaka ahụike mberede, nkwadebe zuru oke bụ nkwa nke njem dị larịị.
3. Gbaa ije na nguzobe
Njem mkpokọta, njem gaa usoro, iji soro usoro otu “otu”, nke a abụghị naanị igosipụta ụdị otu, nwere ike ịchekwa ike karịa, na-achọ onye nwere mmụọ ozi ga-eduga onye ndu, na-achịkwa ọsọ, otu n'otu, debe ebe dị nchebe. , kpachara anya ịrụcha ọrụ ahụ, iji zere ịnya ndị enyi a hapụrụ ahapụ, ịgba ịnyịnya ígwè ga-erubere iwu okporo ụzọ isi, ọ bụghị ịlaghachi azụ, ọ bụghị ịgba ọsọ, onye ọ bụla ga-enwerịrị ike ijikwa ọsọ ahụ, agaghị asọmpi ịsọ asọ, ịdọwa ọsọ, kwụọ ụgwọ ntị na nchekwa okporo ụzọ.
4. Jikwa ọsọ gị mgbe ị na-agbadata
You maghị ma ụzọ a na-amaghị ama dị n'ihu dị ize ndụ, belụsọ na ịchọrọ ịkwanye trapeze, jiri nwayọ ma nọrọ na njikwa.
Adress: District Wuqing, Tianjin, China
© nwebisiinka - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ndụmọdụ - Ngwaahịa dị ọkụ - Ebe nrụọrụ - AMP Mobile
Mountain Bike Na-ekpo ọkụ , Mountain Bike Si China , Mountain Bike , Fat Tire Mountain Bike , Balamụaka Balance Bike , Bike ugwu Mountain Bike ,